Oovimba be-S & P 500 - Iphepha le-12 le-13
Udidi: I-S & P 500
I-S & P 500: Emva kokufikelela kumaXesha amaXesha onke, ibuyela umva kancinci kwiNzuzo-yokuthatha
Ukuhlaziywa: 9 Februwari 2020
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Februwari 9
I-S & P 500 ikhule uninzi lweveki ephelileyo, yagqobhoza phezulu kwaye iphinda ibonakalise amandla. Oku kubonakalisa ngakumbi ukuba i-United States ilawula njani uqoqosho lwayo ngenxa ye-coronavirus kunye nokusilela kokukhula kwihlabathi liphela.
Amanqanaba okumelana: 3450, 3400, 3350
Amanqanaba enkxaso: 3300, 3280.8, 3250
Kuba amathuba okuba inqanaba lama-3220 lenkxaso lingabinakho ukubamba, ixabiso lingazama ukwaphula ezantsi kwaye kusenokwenzeka kwangoko ukwaphula i-avareji yokuhamba yemihla ngemihla ye-5 kunye ne-13, ipeyintwe ngombala obomvu naluhlaza okwesibhakabhaka, ngokwahlukeneyo, kwitshathi, inikezela ngenkxaso yokuqala inqanaba lokuqala.
Ukubuyela umva okunokwenzeka kufuneka kubonwe njengexabiso elinokunyuka lixhaswa ngakumbi nangaphantsi kwamanqanaba e-3000. Ukuphumelela ukuya phezulu kunokukhokelela kwintengiso kumanqanaba angama-3450, indawo leyo, ewe, eya kubangela ukunganyangeki kwengqondo kwaye, mhlawumbi, ukuthatha inzuzo.
Kwelinye icala, kwiiyure ezi-4, iibhere zinokungena kuphela ngaphakathi kwamanqanaba angama-3300, nangona oku kungenakulindeleka ukuba kwenzeke kwixesha elifutshane.
Imakethi ikwimeko ecacileyo yokuthengisa, ukuthengisa kunokuba linyathelo elilandelayo mzuzu xa iibhere zifumana amandla, kuba intengo yamva nje yomsebenzi yayiqhuma kakhulu, nangona kukho iinkxalabo malunga ne China.
I-S & P 500 ibuyela kwiPullback yexeshana edlulileyo kwinqanaba le-3300
Ukuhlaziywa: 4 Februwari 2020
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Februwari 4
I-S & P 500 inyuke ngamandla ekutsaleni okwethutyana kwindawo ephezulu ngoLwesibini njengoko imeko yomngcipheko ilawula intengiso. Abathengi baqokelele umfutho obalulekileyo, kwaye ukupheliswa kwe-3300 eyadlulayo kunokuphinda kubuyekeze lonke ixesha elikufutshane nenqanaba le-3338.50.
Amanqanaba okumelana: 3400, 3350, 3338.5
Amanqanaba enkxaso: 3280.8, 3250, 3182
I-S & P 500 ithengisa kwindawo ephezulu edlulileyo yemihla ngemihla ye-5 kunye ne-13. Emva kwiveki yokudityaniswa, imarike ibuyisa amandla ayo kwaye ichasa inqanaba lokumelana ne-3300.
Ngenxa yokuba abathengi baqokelele umfutho omkhulu, ukuqhekeka ngaphaya kokuchasana okukhankanywe apha ngasentla kunokubuyela ekubuyiseleni ixesha lonke ixesha elikufutshane nenqanaba le-3338.50. Inkxaso ibonakala kufutshane namanqanaba angama-3250 kunye nama-3210 ngokwahlukeneyo.
I-S & P 500 iqale ukuwa ukusuka kumanqanaba angama-3338, njengoko intshukumo evela kuxhathiso oluthe tyaba ithintela ukunyuka kwayo inyuka kwaye yafumana incopho. Oku kwehla kunokuba yinxalenye yentshukumo yokulungisa eya ezantsi ngokulandelelana kwesine, ezinokujonga inkxaso / uptrend kwinqanaba le-3182.
Kwelinye icala, ixabiso lihlala lidlulileyo kwinqanaba le-3280.80 kunye neethagethi kwi-3316.80 kunye ne-3338.50 kumanqanaba okwandiswa, ngelixa i-S & P 500 ihlala ishukuma. Kwimeko engenye engaphantsi kwenqanaba lama-3235.00, ixabiso lingasondela ekwehleni ngamanqanaba angama-3210.00 kunye nama-3182.00 njengeethagethi.
Ixabiso lokungena: 3300
Ukusongelwa kweemarike: I-S & P 500 ibetha ngaphandle kwe-2020 ephezulu njengeCoronavirus yoyika iNtaba
Ukuhlaziywa: 2 Februwari 2020
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Februwari 2
Isalathiso se-S & P 500 sibonisa ukuphakama kwayo ngo-2020 kwinkxalabo ebanzi yokuba ukusasazeka kwe-coronavirus kuya kubamba ukukhula koqoqosho kwihlabathi liphela nge-S & P 500 eyehla ngaphezulu kwe-3% ukusuka ngalo lonke ixesha eliphakamileyo ngoJanuwari 22.
Kwiseshoni yangaphambili, i-S & P 500 yatshona iipesenti eziyi-1.8 ukusukela ngentsimbi yesi-4 emva kwexesha laseNew York, esona sihla sikhulu kwiinyanga ezine. Ixabiso liqale lancitshiswa ezantsi ukukhaba iveki, kwahlanganiswa ukuzalisa umsantsa, emva koko kwaphuka umva. Ngenxa yoku, kujongeka ngathi i-S & P 500 ekugqibeleni ikulungele ukufumana ukubuyela umva.
I-S & P 500 i-Backpedals kwi-Coronavirus yase China, kodwa iRally ehambelanayo ihleli ngokungapheliyo
Ukuhlaziywa: 26 January 2020
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 26
I-S & P 500 iphume kwiseshoni yangaphambili ngokuhla kwe- -0.27% ukuya kwinqanaba le-3,293.6. Nokuba ithini na, i-rally eqhubekayo ihlala ingathintelwanga. Izitokhwe zestokhwe zaseMelika ngokubanzi ziphume kwiseshoni edlulileyo emva kokufika kwecoronavirus yaseTshayina. Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo aseke ingozi yokuqala eUnited States.
Amanqanaba okumelana: 3400, 3350, 3330
Amanqanaba enkxaso: 3300, 3280, 3263
Ukuphela kweseshoni edlulileyo yorhwebo, isalathiso se-S & P 500 siwile, sisuka kwi-1.18% ukuya kwi-3,293.6, emva kokunyuka okwandayo ekuqaleni kweveki ephelileyo, ukubuyela umva kunokufumana inkxaso enokubakho kufutshane namanqanaba amaxabiso e-3300 kunye ne-3280.
Isalathiso sesitokhwe sase-US siyaqhubeka nokurhweba ngendlela ehamba phambili emva kwenkxaso ye-trendline ye-uptrend ejikeleze umgca othe tyaba kwi-3300. Indlela encinci yokuxhathisa ijolise phezulu, kwaye ukuba iinkunzi zeenkomo ziloyisile inqanaba lokumelana ne-3350, intengiso inokwenzeka Qhubeka nokunyuka kokuthengisa, ukurhweba kumanqanaba angama-3400 kunye nama-3450.
Okwangoku, kwelinye icala lexesha leyure ezi-4, ngelixa inqanaba lenkxaso kwi-3 205.0 lihleli lilungile, ixesha langoku elifutshane kulindeleke ukuba landise liye kwi-100% ukusuka kwi-2 853.0 ukuya kwi-3 069.3 nge-2 772, 9 ngolu hlobo lulandelayo.
Kwimeko apho i-S & P 500 ithengisa idlula kwinqanaba lama-3300, emva koko iinkunzi zeenkomo zinokujolisa kumanqanaba e-3330 kunye ne-3350 kwixesha elizayo. Kwimeko engenye, ukuba i-S & P 500 ithengisa ngaphantsi kwamanqanaba angama-3300, iibhere zinokujonga phantsi kumanqanaba angama-3280.8 kunye nama-3263.4 njengeethagethi.
I-S & P 500 yokufumana izibonelelo kunye nokuhlala kwindawo entle enqamleze inqanaba e-3330
Ngexesha lokubhala, i-S & P 500 ihlala ihleli, ihleli kumhlaba olungileyo, kwangaxeshanye, abatyali zimali bakhwela kwisivumelwano sokurhweba phakathi kwe-US ne China. I-S & P 500, enkosi ngokusebenza kwayo okomeleleyo eWall Street, iphakame ngokuthozamileyo kwaye iyonyuswa kukunyanzelwa ngamandla ukuya kumanqanaba angama-3330.
Amanqanaba enkxaso: 3316, 3300, 3280
Kwiseshoni yangaphambili, ixabiso libhalise inqanaba elitsha lembali le-3331.8, kodwa iimeko ezigqityiweyo sele zifunyenwe, njengoko i-RSI yahlala kufutshane namanqaku angama-75.
Abarhwebi banokulindela ukuba ixabiso libuyele kwinqanaba elilandelayo lenkxaso kwangoko lama-3300, kwimeko yeenkomo ezilawula intengiso. Eli lilandelayo linqanaba eliphezulu kwindawo ethile kwinqanaba le-3500.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isiseko senkxaso senziwa kwinqanaba lama-3280.8, elalivumela ukuzinza okwethutyana. Nangona kunjalo, i-uptrend inokuthi iqhubeke njengoko isibini sithengisa ngaphaya kwenqanaba lenkxaso kwi-3316.8, enokuthi ilandelwe yindlela yokuchasa kwinqanaba lama-3350.
Ukucothisa kwi-avareji yokuhamba kwe-5 kunye ne-13 kuyaqhubeka kukonyusa ukubakho kohlengahlengiso olusezantsi, okanye ubuncinci ukuzinza. I-S & P 500 kulindeleke ukuba ijongane noxinzelelo olusezantsi kwixesha elisondeleyo, kodwa xa iyonke, intengiso kulindeleke ukuba iqhubeke nokunyuka.
Akukho Mqondiso woBuyiselo njenge-USDCHF ihleli kwiNqanaba eliPhantsi kwi-0.9680
Ukuhlaziywa: 14 January 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-14 kaJanuwari
Ngexesha lokuqamba, isibini seFX sasirhweba kwinqanaba le-0.9683, siwisa i-0.25% ngosuku emva kokufumana inkxaso ejikeleze inqanaba le-0.9670. Isibini se-USDCHF sabuyisa ilahleko yaso yemihla ngemihla kwaye sagqibela ukurhweba kwinqanaba le-0.9683, apho sahlala singatshintshanga emini.
Amanqanaba okumelana: 1.0231, 0.9841, 0.9770
Umkhwa uhlala ungathathi hlangothi kuba i-USDCHF ikwinqanaba lokurhweba, ukuqala kwinqanaba le-1.0231 (phezulu). Ukuwa kwinqanaba le-1.0126 kubanjwe ngaphakathi kwipateni kwaye kungasondela kwinqanaba le-0.9600 (esezantsi).
Kwimeko yolunye ukonyuka, ukuphumelela kwenqanaba kwi-1.0231 kuyacelwa ukuba kubonakaliswe ukuqala kwakhona kwe-uptrend. Ngaphandle koko, ukurhweba okuqhubekayo ngoluhlu kunokurekhodwa nomngcipheko wokuwa okunye.
I-USDCHF namhlanje yehla kakhulu kodwa ihlala ngaphezulu kwenqanaba lezinga eliphantsi le-0.9659 yenqanaba. I-intraday bias ihlala ihlala ingathathi hlangothi ekuqaleni. Nangona kwinqanaba lokumelana ne-0.9770 licacile, le meko ihlala ibambekile kwaye ukwehla okuzinzileyo kulindelwe.
Kwelinye icala, ukuphumelela kwenqanaba kwi-0.9600 kunokuqhubeka nokuhla ngokubanzi ukusuka kwinqanaba le-1.0231 kunye nokusondela kuqikelelo lwe-100% yenqanaba kwi-1.0231 ukuya kwi-0.9659 ukusuka kwi-1.0027 ukuya kwi-0.9600. Nangona kunjalo, kwelinye icala, ikhefu leqondo le-0.9770 linokubonisa ukwehla kwexesha elifutshane kunye notshintsho kwi-bias ephezulu.
Ixabiso lokungena: 0.9680
Isigaba sokuQala sokuPhakamisa abaThengisi beNtengiso njengeeNtloko ze-S & P 500 ukuya kwiNqanaba lama-3,300
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-nge-14 kaJanuwari
NgoLwesibini, i-S & P 500 ifikelele kwinqanaba elitsha ngalo lonke ixesha, incedwa sisigqibo sikarhulumente wase-US sokuphelisa iilebheli zase China njengesixhobo semali. I-S & P 500 kungoku nje ithengisa nge-3,284 kwiseshoni yaseMelika, yehla kwinqanaba lexabiso lama-3276.8.
Amanqanaba okumelana: 3,350, 3,330, 3,300
Amanqanaba enkxaso: 3,263.4, 3,205, 3,157
I-S & P 500 yexesha elide: Bullish
Kwimeko yoqikelelo lwexesha elide, i-S & P 500 inokubakho ukukhula okuqhubekayo. Ngelixa kwimodeli yamaxabiso sibona ukuba i-bias iyaqhubeka nokunyuka. I-S & P ivaliwe kwinqanaba lexabiso le-3,288 kwiseshoni edlulileyo, ngamanqaku ali-12 kuphela ukusuka kumanqanaba ama-3,300.
Ukuhamba okulindelweyo kwinqanaba elidlulileyo kwi-3300.00 kunokujolisa kwinqanaba kwi-3,330.00 & 3,350.00 ukongezwa. Ngelixa lingaphantsi kwenqanaba le-3,263.4, ukuhla okungaphezulu kunokwenzeka ngamanqanaba e-3,227.0 kunye ne-3,205.0 njengeethagethi.
Ulwakhiwo lwamva nje olungxamisekileyo lubonisa ukuba i-S & P 500 isebenza ngokulandelelana okungaphelelanga kwaye kufanele ukuba ifikelele kwinqanaba elitsha lonke ixesha.
Ngenxa yoko, eyona nto iphambili kwi-S & P 500 inokuhlala ikwimeko entle, ngelixa ixabiso liqhubeka nokuhamba ngaphezulu kwenqanaba lamaxabiso le-3,263.4. Okokugqibela, xa kwenzeka ukuhla okungalindelekanga kumaxabiso phantsi kwenqanaba lamaxabiso angama-3,263.4, sinokucinga ukuba imeko yenkomo iphelile.
Ixabiso lokungena: 3,275
I-S & P 500 iRejista yamaHlathi amaHlathi amaHlaziyiweyo aMatsha phakathi kweXinzelelo lwezeNdalo
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-nge-12 kaJanuwari
I-S & P 500 ihlasele onke amaxesha aphezulu njengoko umngcipheko wemfazwe yase-US-Iran yehlile emva kokuba uMongameli uDonald Trump ebhengeze ukuba ebengalindelanga kuziphindezela. I-S & P 500 ibethe ixesha elitsha lonke ngexesha leseshoni yangaphambili kodwa yaphuma phantsi kwenqanaba eliphambili ubuninzi be-3263.4.
Amanqanaba okumelana: 3350, 3300, 3263
Amanqanaba enkxaso: 3,157, 3,069, 2,853
Ngenxa yokuxhalaba eMbindi Mpuma (okwangoku) kunye nokubanakho kwesivumelwano sokurhweba kwisigaba sokuqala kungekudala, sikhetha ukuba isalathiso siphule iindawo eziphakamileyo. Nangona, ukuba yaphuka phantsi kwamanqanaba angama-3205, ukulungiswa kuya kuqhubeka.
Ukuphumelela kokuphakama okutsha kuxhaswe sisiseko esomeleleyo somgca wokuhamba emva kwexesha lokudityaniswa kwiindawo eziphakamileyo. Umkhwa uhlala uvuseleleka emva kwenqanaba lama-3205, kodwa abarhwebi banokujonga kuseto lwe-bullish oludlulileyo kwinqanaba le-3300.
I-S & P 500 ingaphezulu kwenqanaba lenkxaso kwangoko lama-3205 ngokudityaniswa kwamva nje. Ngenxa yoko, kwixesha elifutshane, umfutho wokukhusela uyagcinwa. Inkqubela phambili yangoku inokusondela kuqikelelo olongezelelekileyo lwenqanaba kwi-2772.9-3069.3 ukusuka kwi-2853.0 kumanqanaba angama-3300 koku kulandelayo.
Nangona kunjalo, amandla anyukayo aya encipha, njengoko kunokubonwa kwi-4 yeeyure ze-RSI. Inqanaba eliphezulu linokuqulathwa kwinqanaba elikwi-3300 ukuya kuthi ga ngokudibanisa ubuncinci. Okwangoku, ukuphumelela kwamanqanaba angama-3205 kunokucebisa ukuba incopho yexesha elifutshane isendaweni kwaye ibuyele kwinqanaba lokuxhasa elisezantsi (ngoku ikwi-3157.2).
Emva kweRekhodi ePhakamileyo ye-S & P 500 Index, Bearish Sentiment Sets In
Ukuhlaziywa: 7 January 2020
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 7
Umngcipheko wokutya ubuyile ngempindezelo xa i-S & P 500 ithumele eyona nto ibaluleke kakhulu ekutshintsheni kwangaphakathi kwiinyanga ezintathu njengoko abatyali zimali bejonga iinkxalabo ezidlulileyo malunga nokunyuka kwembambano kuMbindi Mpuma, kugxilwe kwidatha yoqoqosho ethembekileyo yase-US.
Amanqanaba okumelana: 3,350, 3,300, 3,263
I-S & P 500 Index yexesha elide iTrend: Bullish
Imeko egqithisileyo esele ifunyenwe sele ifunyenwe kuba i-RSI ibikumgangatho ongama-70 ukuya kuma-75 amanqanaba ngaphezulu kweveki kwaye imilinganiselo ehambayo iya kujikela emazantsi emva komzamo wokuphakama ngokuchasene nenqanaba eliphezulu lokumelana nxamnye.
Ukucothisa imeko kuqhubela phambili kukonyusa ukubakho kokulungiswa okuphantsi, okanye ubuncinci ukuzinza.
I-S & P 500 Index yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Abathengisi bangathanda ukuba ixabiso liwele phantsi koxhathiso lwangaphambili lajika inkxaso kwinqanaba le-3,157 kunye nomgca wokunyuka ukunciphisa ifuthe kwintengiso.
Ukophula ngaphantsi kwenqanaba likaDisemba kwi-3,069 kwaye, okona kubaluleke kakhulu, phantsi kwenqanaba elifanayo lenkxaso kwi-3,026, ucango luya kuvulelwa umndilili wokuhamba we-5 kunye ne-13 ejikeleze isithintelo esisezantsi somda othe tyaba.
Isixhobo: I-S & P 500 Index
Ixabiso lokungena: 3,207
tags Inkcazo ye-S & P 500, Uhlalutyo Technical
← Entsha izithuba 1 ... 11 12 13 abaDala izithuba →